Yintoni kwigama leBlog? | Martech Zone
Yintoni kwigama leBlog?
Emva kokufunda Incoko ezihamba ze by URobert Scoble kwaye UShell uSirayeli, Ndigqibe kwelokuba ndenze utshintsho kwibhlog yam. Eyona ibaluleke kakhulu, igama lebhlog. Ibhlog yam ibilula “Douglas Karr”Ngaphambili, kodwa ndenze umsebenzi othile egameni kwaye ndakhetha Kwimpembelelo kunye nokuZenzekelayo. Ndabhala ngayo Apha.
Ndenze izinto ezintle ngendawo ngokunjalo, ndisebenzisa imifanekiso ebonakalayo ngakumbi, umzobo omtsha we-header kunye nomg wam wokuncuma, kunye nokuqwalaselwa ngononophelo komxholo. Ndimele nditsho, nangona kunjalo, ukuthandwa kwebhlog kutshintshe kakhulu ukusukela oko kwathiwa igama elitsha. Ngelixa bendihlala ndifumana ukugcwala kwetrafikhi ngaphambili, ngoku ndifumana ukubetha okuninzi.
Ndingathanda ukucinga ukuba ngokulula umgangatho womxholo undincedile ekutsaleni abafundi abaninzi. Kodwa njengomthengisi wedatha, ndiyaqonda ukuba xa utshintsha inkalo enye yephulo kwaye ugcine yonke into inye- ihlala inguquko oyenzileyo ekhokelela kumahluko. Kule meko yayiza kuthiya ibhlog yam ngegama elinomdla ngakumbi.
Ewe, ukuba bendinegama elifana nelo URobert Scoble, Seth Godin, UMalcolm Gladwell, njl. ... Akukho mfuneko yokuba ndenze nantoni na ngaphezulu kokunamathela njengegama lam lebhlog. Nangona kunjalo, Douglas Karr ayidumanga (okwangoku). Khange ndithengise iklip ebomvu kwindlu, khange ndikhuphe lwazi lutsha lweCIA, kwaye andiyityhilelanga imfihlo yolutsha! Andifuni mizuzu ye-15 yodumo, nangona ndingathanda ukuba ngenye imini ndibeke zonke ezi ngcinga ngokudibeneyo kumthamo omnye.
Ndonwabile ukuba uninzi lwenu lundityelele. Ukugcina ibhlog kuhlala kungasemva kwengqondo yam. Ndifunde okuninzi kubantu abaninzi kangangokuba ndicinga ukuba iibhloko, kunokwenzeka, zezona zinto zilungileyo zinokwenzeka kwiwebhu.
tags: igama lebhlogmalcolm kukuvuyaigamairobob scobleuSeti uthixoUShell uSirayeli
Jul 16, 2006 ngo-12: 13 AM
Khange i-spike ihambelane ne-Seth Godin ikhankanyiwe? (Ndiyakuvuyela nge-BTW). Ndiyazi ukuba khange adibanise nesiza, kodwa ndingacinga ukuba bambalwa abantu abaza kukhangela egameni lakho. Ngaba i-Analytics ibonisa oku konke? Ndinomdla nje….
Jul 16, 2006 ngo-9: 51 AM
Ndifumene i-27 yokubetha kukhangelo lwe-doug + karr kwangolo suku, kodwa akukho nto ukusukela ngoko. Ndisebenzisa google Analytics. Ndingacebisa ukuba ubhalise, iluncedo ngakumbi ukuba uzama ukulandela umkhondo kunye nokukhulisa ukufundwa kwebhlog yakho. Kananjalo, ukuba unayo i-WordPress, yinto nje yokukhuphela iskripthi kumxholo weenyawo zakho. Kulula kakhulu ukuphakama ubaleke!
Jul 16, 2006 ngo-5: 04 PM
Ndihlala ndinomdla kuphando olusisiseko lotshintsho kwintengiso. Oku ngoku malunga nenyanga ubudala. Libe yintoni isiphumo esiphakathi kwibhlog yakho yokwenza uphawu kwakhona?
Ndingaba nomdla kwitshathi ehlaziyiweyo kaGoogleAnalytics (inokuba zimbini malunga neeveki ezintandathu zokugubungela), ukubona nje ukuba isiphumo siphelile emva kwethutyana kananjalo, ngaba abanye banxulumana negama lakho elitsha ngesiqhagamshelo esifanayo isicatshulwa ( I-allinurl:…).
Ndiyathemba ukuba uya kupapasha ulandelelwano.
Jul 16, 2006 ngo-5: 14 PM
Ngokuqinisekileyo ndiya kukugcina kwaye upapashe ukulandelelana. Ndenze inani lotshintsho kwisiza rhoqo. Khange ndijonge ukuthandwa koku kungena kwebhlog, nangona kunjalo. Abantu abanobubele abavela Incoko ezihamba ze uthathe umdla ngokunjalo. Ndiyoyika ukuba iya kuqhuba amanani am ukuya kuthi ga apho ezinye iziphumo zinokungabonakali ngathi zenza umahluko. Ingxaki entle ukuba unayo, nangona!
Feb 19, 2007 ngo-10: 33 AM
Ndingabanomdla kwitshathi ehlaziyiweyo kaGoogleAnalytics (inokuba zimbini zinesithuba esimalunga neeveki ezintandathu), ukubona nje ukuba isiphumo siphelile emva kwethutyana kananjalo, ngaba abanye banxulumana negama lakho elitsha elinombhalo ofanayo ( I-allinurl :?).
Feb 20, 2007 ngo-8: 08 PM
Enkosi ngokuphawula! Ndipapashe izibalo ezimbalwa ukusukela kule posi. Ndikhuthaze ukukhula-kwinqanaba lokuba ngoku ibhlog iyinyani kakhulu ukugcwala kwabantu ngelo xesha. Amanani awazange atshone ezantsi apho bekukho kumbono owubonayo ke ndisakholelwa ukuba ukutshintsha igama kudlale indima enkulu.
Juni 11, 2007 ngo-3: 53 AM
enkosi ngezimvo zakho. Kodwa kuGoogle Analytics kukho ixesha emva kwexesha (iiyure ezi-3..mhlawumbi iiyure ezi-4) ngamanye amaxesha usuku olu-1 mhlawumbi ..
Ngaba ikhona into endinokuyenza ngayo? imalunga nexesha lendawo? okanye ngaba yingxaki yohlobo oluqhelekileyo kunye nohlalutyo lukaGoogle?
Jul 3, 2007 ngo-9: 02 AM
Ndicinga ukuba le ngxaki yingxaki entsha. Ngoku ungasebenzisa ujongano olusha lukaGoogle .. kubonakala ngathi kulungile. kwaye kukho kuphela iiyure ezi-3-4 emva kwexesha.